Jaamacada Admas oo Imtixaan ka qaaday Ardayda Sanadka galaysa Jaamacada + SAWIRO. |
Jaamacada Admas oo Imtixaan ka qaaday Ardayda Sanadka galaysa Jaamacada + SAWIRO.
Hargeysa(GNN) Jaamacada ADMAS UNIVERSITY ayaa imtixaanka galitaanka ardayda cusub(Fresh Students) Ka qaaday manta, imtaxaanka ay jaamcadu qaaday ayaa waxaa ka qayb qaadanay arday aad ubadan.
Jaamacada ADMAS ayaa kamida jaamacadaha ugu horeeya xaga tadaya wax dhigista aqoonta iyo weliba dhisada aradayda xaga akhlaaqiyaadka.
Ardaydani maanta imitixaanka u fadhiisatay oo tiradoodu ahayd 930 Arday ayaa waxa ay ahayeen ardaydii ka soo baxday dugsiyada sarre ee dalka kuwaasi oo nidaamka sax-da ah u soo maray isdiwaan galinta jaamacada caalamiga ah ee ADMAS.
Maamulka Sare ee jaamacada caalamiga ah ee ADMAS ayaa ugu baaqay Dhamaan ardayda cusub ee u fadhiisatay imtixaanka galitaanka jaamacada in ay ku soo dhawaynayaan gacmo furan iyo aqoon tayo sarre leh taasi oo ay bixinayaan barayaal khibrad Dheer u leh wax dhigista,waxaana ilaa hada si habsami ah u socota ardayda kale ee u baahan in ay is-diwaan galiyaan.
Jaamacada caalamiga ah ee ADMAS oo inta badan ka mid ah jaamacadaha sida hagar laanta ah ee uga qayb qaata kor u qaadida aqoonta dhalinyarada heerka jaamacadaha ee ku suga mandaqadani geeska afrika ayaa waxa ay soo kordhisay culuumta Caafimaadka oo ayna hore u bixin jirin jaamacada ADMAS.
Geesta Kale Waxa Lagu Wargalinayaa dhamaan Ardaydani cusub ee maanta u fadhisatay imitixaankani in xaflada soo dhawaynta ardayda cusub ay tahay 20/10/2015 oo ku beegan maalin Salaaso ah habeenimada ay Arbacadu soo galayso iyo xarunta jaamacada caalamiga ah ee ADMAS qaybta guud(Main Campus).